नेप्से ९.१३ अंक घट्दा पनि कारोबार रकम १ अर्ब नाघ्यो, कुन कम्पनीले गर्‍यो सकारात्मक सर्किट ब्रेक ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्से ९.१३ अंक घट्दा पनि कारोबार रकम १ अर्ब नाघ्यो, कुन कम्पनीले गर्‍यो सकारात्मक सर्किट ब्रेक ?
on: May 20, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
जेठ ६, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से परिसूचक ९ दशमलव १३ अंक घटेर १ हजार ३०७ दशमलव ७१ विन्दुमा बन्द भएको छ । यस दिन भरिको कारोबारमा १ हजार ३१६ दशमलव ९३ विन्दुवाट शुरु भएको नेप्से परिसूचक कारोेबारको पहिलो घण्टा पश्चात ओरालो लागेर १ हजार ३१४ दशमलव ५४ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो पश्चात घटबढ हुँदै नेप्से परिसूचक अन्त्यमा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत घट्न पुगेको हो ।
अघिल्लो हप्ताको अन्तिम कारोबार दिनदेखि घट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको नेप्से परिसूचकमा कारोबार रकम बढी भएपनि बजारमा खरीदकर्ताभन्दा विक्रीकर्ताको उच्च चाप रहनुले नेप्से यस दिन पनि ओरालो लागेको छ ।सोमवारको कारोबार अवधिभर ११ समूहको परिसूचकमा २ समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन लगानीकर्ताहरु जलविद्युत समूहमा बढी आर्कषित भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूहको १ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेको छ । साथै, वित्त समूहको परिसूचक ३ दशमलव १६ अंक घटेको छ ।
सोमवार रू. १ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनका कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १२ दशमलव १० प्रतिशत बढी हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ० दशमलव ९९ अंक घटेर २७९ दशमलव ८० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्टको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक, ५ कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशत बढ्यो
सोमवार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९१ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको यो लगातार दोस्रो दिन सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको हो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा नाफा बढेको कम्पनीको शेयर मूल्यमा रू. ११ ले बढेर रू. १२२ पुगेको छ ।
यस्तै दोस्रोमा १ बराबर ८ दशमलव ६४ (१ः८.६४४६९) अनुपातमा २ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको मल्टीपर्पस फाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७० प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीले जेठ ५ गते सो हकप्रद शेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको हो । यस्तै सिन्धु विकास बैंकको ९ दशमलव २९ प्रतिशत, बेष्ट फाइनान्सको ९ दशमलव २८ प्रतिशत, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत शेयर मूल्य बढेको छ ।
साथै, सोमवार दिन भरिको कारोबारमा पाँचथर पावर कम्पनीको शेयर मूल्य ७ दशमलव ७६ प्रतिशत घटेको छ भने मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य रू. ३७ घटेर रू. ४७३ मा कारोबार भएको छ ।
शिवमको सर्वाधिक कारोबार
सोमवारको एक दिन भरिको कारोबारमा शिवम् सिमेन्ट्सको सर्वाधिक रू. २५ करोड २१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ५८८ रहेको छ । दोस्रोमा नेपाल बैंंक लिमिटेडको रू. २३ करोड २१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ३ सय ३८ पुगेको छ । कारोबार भएका १७२ कम्पनीमा ४४ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १०७ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २१ कम्पनीको स्थिर रहेको छ ।
११ समूहको परिसूचक, कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ?
नेप्से स्थिर (१२ बजेको अपडेट)
नेप्से परिसूचक ०.२० अंक घट्यो, ३० करोडको कारोबार (कुन–कुन समूह बढ्यो ?)